Wahaabi Wabxay! – Kaasho Maanka
W/Q: Abdi Gelle
Waa konton jir garweyn, bidaar leh oo calooshu in door ah ka horrayso. Waxa uu xoogaa dhaqaale ah ka gogtay, lacag loogu talagalay dhismeyaal masaajid iyo maddarasado lagu madalgeeyo fikirka Wahaabiyada shilimaadkaas oo Sacuudigu baxshay.
Hawlahaas ayaa uu ku talaxtagay oo ka taajiray, dadka waxa uu ku qiimeeyaa garka, khamiiska, cimaamadda iyo surweelka gaaban ee boqonta jooga.
Waxaa u dhaxda afar xaas oo aan guriga ka soo bixin, isla markaa na uu sida addoomaha u maamulo.
Xaasaskiisa waxa uu u daaraa oo ay dhageystaan cajalad wadaad xuurtaysani duubay oo ka hadasha wax loogu yeeray (Xuquuqul Zawjayn) cajiladdaas waxaa ka dhex hadlaya wadaad xiiqsan.
Muxaadarada wadaadku waxa ay daarran tahay, cadaab iyo ciqaab dumarka raggooda ku afceliya uun ku wajahan. Waxa uu ka soo horjeedaa in dumarku wax bartaan, isla markaa na kartidooda soo bandhigaan iyaga oo aan shareecada ka tallaabsan.
Waxa uu og yahay in aan gabar waxbaratay oo nolosha fahamsani yeelayn in uu maanduubo oo santuuq ku xirto, sida bahalka yar ee duula ee loo yaqaan nirgodhoobka; kaas oo tobanaanka dirindiirood dhoobada ku xaraysta.
Isagu sida uu doono ayaa uu yeelaa oo waxa uu rabo waa uu u madax bannaan yahay.
Haddii reerkoodu cid kale u shirayo ama duullaan galayo waxa uu wax ka bixiyaa qaaraanka.
Marka uu masjidka tago khudbadda Jimcaha waxa uu kaga hadlaa, arrimo ay ka mid yihiin in aan gabdhaha seetada laga dabcin ee la xakameeyo si aanay dunidu u fasahaadin iwm.
Ka ma hadlo raashinka, daawooyinka iyo agabyada dhacay ee ganacsatada ay isku xisbiga yihiin keento. Ka ma hadlo canshuurta qaadisteeda dadka lagu laayo iyo waxyaalaha gurracan ee maamulku sameeyo. Waxa uu cabbaa xulbad, xabbatul-sowda iyo toon, safka haddii aad salaadda ku dhinac xiratid matag ayaa ku qabanaya; hadda na waxa uu u qabaa in uu yahay midka dunida inta saaran ugu wanaagsan!
Waxa ay sheekaystaan rag ay jaal yihiin oo u badan qawlaysato agabyada dhacay ka taajiray. Galabtii ayaa la soo fadhiistaa meherad shaaha iyo cuntada lagu iibiyo oo uu leeyahay mid ururka ka tirsan.
Shaqaaluhu waxa ay adeegga dadka u kala siiyaan sida ay u kala garweyn yihiin, iyaga oo dadka surweelka boqonta dhaafiya ku canaadaya shaaha; isla markaa na dhego-adayg u muujinaya.
Waxaa lagu yiri qof aan sunnadu ka muuqan ha u dhego nuglaanina!
Qormadaan waxaa qoray Nuuradiin Buryar, qofka ku qoranina waa uu soo boolyay ee asagu ma leh.
Fadlan dawga qoraalka ha la dhowro!
Reply to Farxiyo Baashe
Qoraalkan waxa uu lagu soo diray email-ka mareegtan, qoraagu ma raacin inuu cid kale kasoo minguuriyay, siyaasadda mareegtanna ma qabto inaan raadino ama xaqiijinno cidda dhabta ee qoraalka samaysay maadaama marar badan ayna rabin in magacooda iyo wajigooda bannaanka keenaan. Sidaa darteed haddii qoraaga aad xustay uuna raalli ka ahayn oo laga soo xaday (sida aad hadalka u dhigtay) waa la bedeli doonaa magaca ama laga saari doonnaa hadba midka uu codsado kadib markaan xaqiijinno sheegashadiisa.
Diintu Horumar ma keento!
Qaybta: Diimaha, Diinta Islaamka
Habaar, cibaado badan iyo baryootan waxay kuu tarayaan ama kuus oo dhicinayaan ma jirto, cid aad wax kaga qaadeyso ama ku diliysaa ma jirto, kac oo dalka dhiso. Dal duco laguma dhiso habaarna laguma dumiyo.
Diintu horumar ma keento balse qofka caqligiisa ayay naafeysaa una diidaa inuu horumar ku tallaabsado ama ka fikiro.
Akhri Qormadan7 Faallo
Wadaado ma qori karaan dastuurka Soomaaliya?
Qaybta: Aragtiyo, Wahaabiya
Xeerka qaranka Soomaaliya waxaa dejintiisa lagu daray wadaaddo, waana arrin foolxumo ah in ay wadaaddadu ka soo baxeen masaajidda iyo mawlacyada oo ay faraha ku la jiraan arrimaha dowladda. Wadaaddadu waxa ay samayn jireen in ay Quraan, Mawliid iyo Burde dadka jiran ku akhriyaan, in ay wardiyaan, in ay naagtii loo la yimaado meheriyaan iyo in ay awliyada ku digriyaan, nebigana ku salliyaan. Maxay...
Cilmaaniyaddu waa badbaado
Dadka Soomaaliyeed weligoodba waxay ahaayeen dad ku dhaqma iskuna maamula nidaam cilmaani ah oo aan isku qasayn diinta iyo maamulka. Xeer Soomaali ayaa la isku maamuli jirey, dadku waxay u qaybsanaayeen Waranle, Ugaas iyo Wadaad, koox waliba shaqadeeda ayay qabsan jirtey kumana xad-gudbi jirin shaqada kooxda kale.
Degeladeena marka ay colaad ka aloosanto, cudur dilaaco ama abaaro dhacaan oo ay umadu dhibaatooto boqol jeer baad maqashaa wadaad meel iska taagaya oo leh, "dumarkii oo xijaabka ka tagay ama heesaha la dhagaysanayo baa u wacan abaaraha iyo dhibaatada!"
W/Q: Abdi Gelle 26th August 2020
Wahaabiyada ma la carbin karaa?